Gowwumaa Immoo Harrummaa Dha? | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Gowwumaa Immoo Harrummaa Dha?
July 1, 2017 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.ORG	Leave a comment
Damee Boruu irraa Takkaa gowwoomuun waan jiru. Bara Baraan gowwoomuun garuu harrummaa malee gamnummaa miti. Mootonni Habashaa yaroo humni isaanii dhabee haxxawwa mee lafa irraa baduuf jedhu gamnuma…
Source: Gowwumaa Immoo Harrummaa Dha?
Previous PostPrevious PostNext PostGowwumaa Immoo Harrummaa Dha?